Published October 14, 2020 at 10:49 PM CDT
Madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee UnityPoint Health ayaa sheegay in xaruntiisa ay arkeysay bukaan socodka soo kordhay todobaadyo dhowr ah, tan iyo bilowgii sanad dugsiyeedka. Waxa uu sheegay in cudurkan faafa uu ku adag yahay dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha, laakiin ay xoogaa nasasho ah heleen bartamihii bishii Ogos markii kaliya hal ilaa laba qof laga dawaynayay cudurka.
Wold wuxuu leeyahay xilliyada hargabka ee soo socda waxaa jira heer cusub oo walaac ah sidaa darteed wuxuu kula talinayaa dadka inay xirtaan maaskarada oo ay qaataan tallaalka ifilada.
Saraakiisha Nebraska waxay yiraahdaan dabaaldegyada Halloween waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin in la beddelo maadaama gobolka uu sii wado inuu sameeyo diiwaanno ku saabsan tirada isbitaalada la dhigo ee coronavirus. Gov Pete Ricketts ayaa sheegay in caruurtu wali awood u yeelan doonaan inay aadaan khiyaano ama daweyn laakiin dadku waxaa laga yaabaa inay go'aansadaan inay nacnac uga tagaan barxadahooda si ay caruurtu u soo qaataan halkii ay iyagu naftooda u bixin lahaayeen. Ricketts, oo tirtiray inta badan xannibaadaha fayraska ee gobolka, uma badna inuu soo rogi doono sharciyo cusub oo loogu talagalay Halloween, laakiin wuxuu ku dhiirrigeliyey dadka inay raacaan talooyinka saraakiisha caafimaadka bulshada ee ugu yeeray khiyaanooyinka-ama-daweynta dhaq-dhaqaaqa halista sare leh.
Duulimaadkii ugu horreeyay ee toos ah oo ka yimaada Denver kuna socda Sioux City sannado dhowr ah ayaa yimid Sioux Gateway Airport galabnimadii Arbacada. Duulimaadka United Airlines ee ay maamusho SkyWest waxaa jadwalka loogu talagalay soo degaysaa qiyaastii 4:30. Guri furan iyo xarig goyn ay la yeesheen hogaamiyaasha magaalada ayaa sidoo kale la qabtay. Markii ugu dambeysay ee adeeg toos ah laga helo Sioux City ilaa Denver waxay ahayd markii Xudduudda ay ka baxday suuqa dayrta 2014.
Hantidhawraha Degmada Woodbury iyo Wakiilka Doorashooyinka Pat Gill ayaa ku dhawaaqay degel cusub oo doorashada ah.
(Ku dheji dhejinta shabakadda:https://elections.woodburycountyiowa.gov)
Gill wuxuu leeyahay degelku wuxuu sahlanaan doonaa in la maro si loo helo macluumaadka doorashada, loo diiwaangeliyo si loo codeeyo, si loo helo foom lagu codsado codbixinta maqnaanshaha.
Waxaa laga heli karaa websaydhka Degmada Woodbury.